Kusundwa neChisina Magumo - Cloud Library
‹ Enda ku peji yeChirungu
Mutauro Uripo Iyezvino: chiShona
Pamba - Mabhuku - Kusundwa neChisina Magumo
Kusundwa neChisina Magumo
Mudzidzisi: John Bevere
Hupenyu wepanyika pano hausi chinhu asi mhute, sezvo vazhinji vedu tichirarama sezvinonzi hakuna chimwe chinhu kune rumwe rutivi. Asi nzira yatinorarama nayo hupenyu huno icharatidza kuti tichapedza sei nguva yekusina magumo. Rugwaro runotiudza isu kuti kuchange kuine zvidanho zvakasiyana zvemibairo yevatendiꟷkutanga nekuona izvo zvose munhu akakwanisa kuita zvichiparadzwa pakutongwa, kunosvika pakutonga naKristu pachake.
Tichitoredzera kubva pamirawo iri muna 2 VaKorinde 5:9-11, John Bevere anotirangaridza kuti vatendi vose vachamira pamberi paKristu kuti vagamuchire zvavakashandira muhupenyu. Vazhinji vedu vachashamiswa kuziva kuti nguva yedu zhinji yakapedzerwa pane zvinhu zvisina nebasa kune mibairo yekusaguma.
Saka tingavandudza sei hupenyu hune chimiro? Muna Kusundwa neChisina Magumo, uchadzidza kuziva kudanwa kwako nekuwedzera izvo Mwari vakakupa. Apo unowana maonero ekusaguma, uchasimudzirwa kuti ushandire izvo zvinogara.
Turunura (~3.37 MB)
Goverawo uchapupu hwako
Mabhuku ari mu Raibhurari yemuGore (Cloud Library) chipo kwamuri! Munokurudzirwa kuparadzira kune vamwe, kushandisa zvikamu huye kugoverana nevamwe. Tumirai mavhidhiyo, mabhuku ekuteerera nemharidzo idzi pa YouTube, TuDou, Youku kana dzimwe nzvimbo dzepa indaneti mokochekera Cloudlibrary.org pa peji yenyu kutizvibatsire vamwe kuwana mahridzo nemabhuku aya. Tumirai mabhuku aya netsamba dzemagetsi kuvanhu vemukereke, vanodzidzira kutia vafundisi, vamwewo vatungamiriri nevamwewo vaungafunge kuti vangaropafadzwe kuwana mabhuku nemharidzo idzi mururimi rwavo.
©2012-2021 Cloud Library (Raibhurari yemuGore)